Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် နံရံတံတိုင်းများ မလိုအပ်ပါ(အယ်ဒီတာ့အာဘော်)အချို့က ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို တာမြစ်သည့် ...
စစ်တပ်နှင့် ရဲက သိမ်းထားသော မြေများအတွက် သမ္မတထံ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတင်ပြီးမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတို့က သိမ်းထားသော မြေကိစ္စများနှင့် ...
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှအချက် ရှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီခရိုင်၊ ဆုံဆည်းမြိုင်ဒေသ ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် (DKBA) ...
ALD နှင့် RNDP ပေါင်း၍ “ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ” အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မည်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD)နှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)တို့က တပါတီတည်းအဖြစ် ...
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြေစာရရန် တစ်ဧက သုံးသောင်း ပေးနေရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ အလန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် လယ်သမားများသည် ...
မလေးရှား ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ မြန်မာလုပ်သားများ မြန်မာအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆွေးနွေးထားမလေးရှားနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများကို လွှဲပြောင်းပေးရန် မလေးရှား ...
အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ဟုဆိုကာ ဆန္ဒပြအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ...
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအကူအညီဖြင့် မလေးရောက် မြန်မာ ၂၅ ဦး ပထမဆုံး ပြန်လည်ရောက်ရှိမလေးရှားတွင် မြန်မာများ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ...	စီးပွားရေး
ပုဂံဇုန် ဝင်ကြေး တိုးမည်ဆိုလည်း နိုင်ငံခြားဧည့်သည် ပိုဝင်ရောက် ဖွယ်သာရှိရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတခုဖြစ်သော ပုဂံဒေသတွင် ဇုန်ဝင်ကြေးများကို ဇူလိုင်လမှ စတင်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ ......	မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးချဲ့ရန် အစိုးရ တိုက်တွန်းနေဟု ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြားမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဗြိတိန်အစိုးရအနေဖြင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းရှင်များကို တိုက်တွန်းလျှက်ရှိကြောင်း ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ...	မွန်ပြည်နယ်မှ ဆားတန်ချိန်တစ်သောင်း မန္တလေးသို့ ပထမဆုံးတင်ပို့မွန်ပြည်နယ်မှ ဆားတန်ချိန် တစ်သောင်းခန့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် မန္တလေးသို့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်က စတင် တင်ပို့သည် ဟု...	ပုံမှန်လမ်းကြောင်းမှ ဆန်အိပ်စ်ပို့ ရပ်ထားသော်လည်း နယ်စပ်မှ တရုတ်သို့ဆက်ပို့နေပြည်ပသို့ Normal Trade (ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု)မှ ဆန်တင်ပို့မှုအား နှစ်လခန့်ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ...	ပုဂံဇုန် ဝင်ကြေး တိုးမည်ဆိုလည်း နိုင်ငံခြားဧည့်သည် ပိုဝင်ရောက် ဖွယ်သာရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးချဲ့ရန် အစိုးရ တိုက်တွန်းနေဟု ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြားမွန်ပြည်နယ်မှ ဆားတန်ချိန်တစ်သောင်း မန္တလေးသို့ ပထမဆုံးတင်ပို့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းမှ ဆန်အိပ်စ်ပို့ ရပ်ထားသော်လည်း နယ်စပ်မှ တရုတ်သို့ဆက်ပို့နေ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန်မြို့နယ်ရှိ သိမ်ဖြူ ဘောလုံး အားကစားကွင်းကို ပုဂ္ဂလိက စီပွားရေး ... KNPP နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးမည်ကယားပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်းတခု ဖြစ်သော ကရင်နီ ...အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေး သည်လည်း အခရာကျသည်(အယ်ဒီတာ့အာဘော်) အစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကိုးကြိမ်ပေးထားသော်လည်း ...ဆင်းရဲတော့မှ ချမ်းသာတော့သည်(ဆောင်းပါး) မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘောင်္သားဆိုတာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေထဲမှာတော့ စားနိုင်၊ သောက်နိုင် ...တောင်သူမိသားစုများ ပညာသင်ကြားရေး ဆန်စပါးအသင်း ထောက်ပံ့မည်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည့် တောင်သူသားသမီးများအား ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်သည်အထိ ...ပုဂံဇုန် ဝင်ကြေး တိုးမည်ဆိုလည်း နိုင်ငံခြားဧည့်သည် ပိုဝင်ရောက် ဖွယ်သာရှိ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေတခုဖြစ်သော ပုဂံဒေသတွင် ဇုန်ဝင်ကြေးများကို ဇူလိုင်လမှ စတင် ...လက်ပံတောင်း တောင်သူများ လယ်ယာ လျော်ကြေး ယူရန် ဖိအားပေးခံနေရဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အနီးရှိ လယ်ယာမြေများကို ...ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင် သုံးဦးကို ရဲ ဆင့်ခေါ်လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းအရေး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးခဲ့ရာတွင် နိုင်ငံတော် ...	အာဘော်နှင့်အမြင်
နံရံတံတိုင်းများ မလိုအပ်ပါအချို့က ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို တာမြစ်သည့် ဥပဒေကြမ်း တခု လွှတ်တော်သို့တင်သွးရန် စီစဉ်လျက် ရှိနေသည်။ ဤသို့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတခုနှင့်...	ဆင်းရဲတော့မှ ချမ်းသာတော့သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘောင်္သားဆိုတာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေထဲမှာတော့ စားနိုင်၊ သောက်နိုင်၊ သုံးနိုင်၊ ဖြုန်းနိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်ကား စီးနိုင်သူဖြစ်လို့ ......	အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေးသည်လည်း အခရာကျသည်အမျိုးသမီးများကို ပညာသင်ကြားပေးခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင် ဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ မိန်းကလေးငယ်များကို ကျောင်းပို့လွှတ် ...	နေတတ်ရင် သီချင်းကလေးနဲ့လူတစ်ကိုယ် စရိုက်တစ်မျိုးလို့ ဆိုသလိုပဲဗျ။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး သပွတ်အူကျေးရွာကရွှေပွတ်စိုးမြင့် ဆိုတဲ့ လူကြီးဟာ ဘယ့်နှယ်စရိုက်မှန်း ...	နံရံတံတိုင်းများ မလိုအပ်ပါဆင်းရဲတော့မှ ချမ်းသာတော့သည်အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေးသည်လည်း အခရာကျသည်နေတတ်ရင် သီချင်းကလေးနဲ့
မဇ္ဈိမ ပရိသတ် ဆန်းစစ်လွှာ
တချိန်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ထောက်ခံ့ ခဲ့သော အိန္ဒိယ အစိုးရနှင့် မြန်မာ အစိုးရအကြား ...
သမ္မတအိုဘားမား မိန့်ခွန်းအကြို ကောက်နုတ်ချက်များ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် ကျနော်ဒီကိုလာခဲ့တာလို့ပဲ
"နေရူးကိုတွေ့ရှိခြင်း"ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဟောပြောပို့ချချက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း သွားရောက်မည့်နေရာများ
(အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာ) ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်က ပူတာအိုခရိုင်၊ ခေါင်လန်ဖူးဒေသဆိုတာ တကယ်ခေါင်းပါးတဲ့
“လွှတ်တော်အသံ၊ ပြည်သူ့အသံ” ဟုတ်ပါရဲ့လား
ဆရာမ တယောက်အတွက် လျော်ကြေး
တိုးလိုးတန်းလန်း မြောင်းကြီး တာဝန်ယူမယ့်သူ မရှိသေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ...
ရန်ကုန်တွင် မြေငှား လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များ ကမ်းလှမ်းမှု ရှိလာ
ခရီးသည်တင်ဒိုင်နာကား မောင်းနေစဉ် ဂက်စ်ပိုက်ပေါက် မီးလောင်
လူရွှင်တော်ပန်းသီး မန္တလေးမြို့မအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေမည်ဟုဆို
မန္တလေး၂၉ လမ်း (ကိုင်းတန်းညဈေး) မပြောင်းရွှေ့ရေး ဆန္ဒပြသူ ခုနစ်ဦးအတွက် အယူခံဝင်မည်
အချို့က ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို တာမြစ်သည့် ဥပဒေကြမ်း တခု လွှတ်တော်သို့တင်သွးရန် စီစဉ်လျက် ရှိနေ...
လယ်သမားတို့ လယ်လုပ်ဖို့ လယ်ယာမြေ ပြန်ပေးပါ
ကူညီရာမဲ့ နိုင်ငံသားများနှင့် တာဝန်သိ တာဝန်ရှိ အစိုးရ
မြို့တော်ဟောင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါစို့
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လယ်မြေများ အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေများကို သိမ်းယူကာ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဖယ်ရှားပစ်...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘောင်္သားဆိုတာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေထဲမှာတော့ စားနိုင်၊ သောက်နိုင်၊ သုံးနိုင်၊ ဖြုန်းနိုင်၊ ကိုယ...
နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး သဘောထား
အိန္ဒိယမှ နှလုံးနှင့် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကုသပေးရန် စီစဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ...
We have 157 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved